Jerusalem atịchok nhazi osisi n'okpuru-ewu na Lipetsk mpaghara - "nduku System" magazine
Na mpaghara Lipetsk, na ókèala nke mpaghara akụ na ụba pụrụ iche nke mpaghara mpaghara na obodo Dankov, arụchaala injinịa na ọrụ imepụta maka owuwu nke osisi Russia mbụ maka imepụta ụlọ ọrụ nke ihe eji eme ọgwụ. Ka ọ dị ugbu a, etinyela ọtụtụ akụrụngwa ihe ọkụkụ na mpaghara nnata, ịsa, ịcha na mgbasa nke akụrụngwa.
Emechara ngwube nke owuwu nke mbụ nke osisi na inyefe nke nkwukọrịta na oge opupu ihe ubi nke 2021. Companylọ ọrụ "EastAgro Don" wepụtara ihe dị ka ọnwa isii maka "ọsọ" nke teknụzụ mmepụta, na ọdịda nke 2021 a na-atụ anya na osisi ahụ ga-eru oke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ike nhazi nke ihe nhazi nke osisi a ga - eru 500 tọn Jerusalem atịchok kwa ụbọchị, na kwa afọ nke ngwaahịa ikpeazụ - ruo 15 puku tọn.
A ga-enyefe ọtụtụ ndị na-emepụta nri, gụnyere PepsiCo Russia.
Tags: Lipetsk mpagharammepụta nke ọgwụ njeJerusalem atịchok
Tongwọ ọnụahịa Platon ga-ebili site na February 1
A na-akwụ ụgwọ maka ire ere nke ọdụ ụgbọ mmiri Yeletsk maka nduku kwụsịtụrụ
Osisi maka imepụta ihe nchebe nke ihe ọkụkụ mepere na mpaghara Lipetsk